Dargaggoota Itoophiyaa: Sagantaan tajaajila hawaasaa eebbifamtootaa eegaluufi jedhame - BBC News Afaan Oromoo
Dargaggoota Itoophiyaa: Sagantaan tajaajila hawaasaa eebbifamtootaa eegaluufi jedhame
Ministeerri Nagaa dargaggoota dhaabbilee barnootaa olaanoo irraa eebbifamanii hojii hin arganne, tajaajila hawaasaa waggaa tokkof turu irratti bobbaasuuf akka ta'e beeksise.
Ministeerichatti daayrektarri olaantuu Waajjira Qindeessa Dhaabbilee itti gaafatamni isaanii ministeerichaaf ta'e fi michummaa tarsiimo'aa aadde Aasaam Radii dhimmicharratti miidiyaaleef ibsa laataniiru.
Tajaajila hawaasaa tola oltummaa kanaaf galmeen eegalamuusaa kan himan Aadde Aasmaa Radii "ministeerichi waggaa tokkoof qorannaa fi hawaasa waliinis marii taasisaa ture" jedhan.
Kaayyon tajaajila hawaasaa kanaas dargaggootni beekumsa dhaabbilee barnotaatii argatanin dabalataan beekumsawwan fi dandeettiwwan hawaasaa akka argatanifi jedhameera.
Dargaggoonni waltajjii siyaasa mormiirraa maaliif dhiban?
'Araadni waraana dargaggoota irratti labsameedha'
Eebbifamtootni hojii tajaajila hawaasaa osoo hin eegalin dura leenjin ji'oota sadif turu akka kennamu kan dubbatan Aadde Aasmaa leenjin kennamu dandeettii waliin jireenya fi waliigaltee uumuu kan cimsu akka ta'e himan.
Dabalataan leenjin sochii qaamaa fi xiinsammuu akka kennamanis himaniiru.
Leenjii kana erga xumuranii booda kutaalee biyyattii garaagaraatti ramaduun waggaa tokkoof dhaabbilee mootummaa, dhaabbilee dhuunfaa kannen akka investimantii fi kunnen biroo keesaatti akka hojjetan taasifama jedhan.
"Baasiwwan jiraachuu isaan dandeessisan mara mootummaatu kaffala," jechuun kan himan Aadde Aasaam "qarshiin korojoof ta'uu fi tajaajilawwan geejibaa fi fayyaa akka argatan ni taasifama," jedhan.
Dhimmicharratti Ministeerri Nagaa Komishinii Carraa Hojii Uumuu walin akka hojjetu fi dargaggootni kunnen hojii akka uumataniif fi dandeetti agarsiisan irratti hundaa'un carraan dhaabbilee sana keessatti qacaramuu argachuu akka danda'a himan.
"Nageenyi dargaggoota hojii tajaajila hawaasaa irratti bobba'anii akka eegamuufis caasaalee nageenyaa naannolee walin ni hojjenna" kan jedhan Aadde Aasmaa Radi "hawaasa irraayis amantaa guddaa qabna" jedhan.
Hojii tajaajila hawaasaa marsaa duraatin dargaggootni 10,000 akka hirmaatan, kanaafis maallaqni birrii Miiliyoona 900 ramadamuu isaa fi guyyoota 10 hanga 15 itti aanan keessatti akka eegalsiifamu himameera.
"Hojii kanaanis adda durummaan hawaasni fayyadamaa ta'a" jedhameera.